China Evaporation kunye crystallization technology abavelisi kunye nababoneleli |IJINTA
Ulwelo lwenkunkuma ye-Molasses yotywala ludlakadlaka kakhulu kwaye lunechroma ephezulu, ekunzima ukuyisusa ngendlela ye-biochemical.Ukutshisa okugxininisiweyo okanye isichumiso solwelo esisebenza kakuhle kakhulu sesona sicwangciso sonyango sicokisekileyo ngoku.
Inkunkuma ye-Molasses yolwelo lwe-alcohol yesixhobo esinesiphumo esintlanu sokwenza umphunga
Umthombo, iimpawu kunye nokwenzakala kwamanzi amdaka emolasi
Amanzi amdaka e-Molasses utywala amdaka aphezulu kwaye anombala ophakamileyo amdaka akhutshwa kwindawo yokusebenzela yotywala kumzi-mveliso weswekile ukuvelisa utywala emva kokubiliswa kwemolasses.Ityebile kwiprotheyini kunye nezinye izinto eziphilayo, kwaye iqulethe iityuwa ezininzi ze-inorganic ezifana ne-Ca kunye ne-Mg kunye nokugxila okuphezulu.SO2 njalo njalo.Ngokuqhelekileyo, i-pH yamanzi amdaka yotywala yi-4.0-4.8, i-COD yi-100,000-130,000 mg / 1, i-BOD yi-57-67,000 mgSs, 10.8-82.4 mg / 1.Ukongeza, uninzi lwalo hlobo lwamanzi amdaka lune-acidic, kwaye umbala uphezulu kakhulu, umdaka-omnyama, ikakhulu kubandakanywa umbala we-caramel, umbala we-phenolic, umbala we-Maillard njalo njalo.Ekubeni ulwelo lwenkunkuma luqulethe malunga ne-10% ye-solids, i-concentration iphantsi kwaye ayikwazi ukusetyenziswa.Ukuba ikhutshelwa ngokuthe ngqo emilanjeni nakwimihlaba yeefama ngaphandle konyango, iya kungcolisa ngokunzulu umgangatho wamanzi kunye nokusingqongileyo, okanye ibangele ukugada komhlaba nokuxineka, nokukhula kwezifo zezityalo.Indlela yokujongana nokusebenzisa ulwelo lwenkunkuma yotywala yingxaki enkulu ejongene neshishini leswekile.
Isixhobo samkela inkqubo yokutyhutyha ngenyanzelo ye-5-effect-down step-down, kunye nomphunga ogcweleyo njengomthombo wobushushu, ukufudumeza kwesiphumo esinye kunye nomsebenzi onempembelelo emihlanu.Ulwelo lwenkunkuma ye-molasses yotywala kunye noxinaniso lwe-5 ukuya kwi-6% lugxininise kwaye lube ngumphunga, kunye nodaka olugxininisiweyo olunoxinzelelo lwe-≥ 60% luthunyelwa kwibhoyila ukuze lutshiswe, kwaye ubushushu obuveliswayo bubanelisa kakhulu umphunga wesixhobo.Yenza umphunga amanzi ajikiweyo uwabuyisele kwicandelo langaphambili ukuze axutywe namanzi.
Okwesibini, itshati yenkqubo yokuhamba
Okwesithathu, iimpawu zenkqubo
1. Beka i-evaporator esecaleni ukucima izinto eziphathekayo, ezinokuqonda ukucocwa okungayekiyo kunye nokuqinisekisa ukuveliswa okuqhubekayo.
2. Isixhobo samkela ulawulo lwenkqubo oluzenzekelayo ukugcina iindleko zabasebenzi.
3. Ukusebenza okuphezulu kunye nokusebenza okuzinzileyo.
4. Ngokusebenzisa i-slurry engqindilili ukubuyela kwibhoyila, i-molasses inokuvelisa utywala ngaphandle kokufaka amafutha.
5. I-evaporator ye-spare isetyenziselwe umphumo wokukhupha, onokuqonda ukucocwa okungapheliyo kunye nokuqinisekisa ukuveliswa okuqhubekayo.
6. Utywala bungaveliswa kwimolasi ngaphandle kokufaka isibaso ngodaka olungqindilili kwibhoyila ukuze ziphinde zisetyenziswe kunye nemolasi.
Ngaphambili: Inkqubo yokuvelisa i-Ethanol
Okulandelayo: Inkqubo ye-crystallization eqhubekayo ye-Aginomoto
Threonine intshayelelo L-threonine kubalulekile amino acid, kwaye threonine ikakhulu isetyenziswa amayeza, iirejenti imichiza, iziqinisekiso ukutya, izongezo zokutya, njl. Ngokukodwa, inani lezongezo zokutya likhula ngokukhawuleza.Ihlala yongezwa kwisondlo samantshontsho eehagu aselula kunye neenkukhu.Yeyesibini ithintelwe i-amino acid ekutyeni kweehagu kwaye eyesithathu ithintelwe i-amino acid ekutyeni kweenkukhu.Yongeza i-L-th...